‘धुम ४’बाट सलमानलाई किन हटाइयो ? – Tulsimedia
‘धुम ४’बाट सलमानलाई किन हटाइयो ?
एजेन्सी, ४ भदौ । केही समय अघि अभिनेता सलमान खान चोरको भुमिकामा देखिने समाचार सार्वजनिक भएको थियो । तर फिल्म निर्माताहरुले सलमान खानको सो स्थानलाई अन्य अभिनेता, शाहरुख खान र रणवीरलाई दिने निर्णय गरेका छन् ।
सलमान खानलाई भारी प¥यो अभिषेक बच्चन ?
अहिले ‘धुम ४’ फिल्मको लागि अभिनेता सलमान चाहन्छन् कि अभिषेक बच्चनलाई नलिइयोस् । अहिलेसम्म धुमको सबै सिरिजमा अभिषेकलाई देखाईदै आएको छ । फिल्ममा अभिषेकलाई प्रहरीको भुमिकामा देखाईएको छ । अभिषेकको सो भुमिका दर्शकहरुलाई पनि निकै मन परेको थियो ।
अर्को तर्फ अभिनेता सलमान पनि अभिषेकसँग काम गर्न चाहैनन् ।यो सन्दर्भमा निर्माताहरुले अभिषेकलाई कुनै पनि हालतमा फिल्मबाट हटाउन चाहदैनन् । यसै कारण निर्माताहरुले सलमानलाई फिल्मबाट टाढै राख्न समग्रमा राम्रो उपाय ठानेका हुन् ।